Himalaya Dainik » सुन्दर देखिन दीपिका गर्छिन् के ? साबुनको सट्टा लगाउँछिन् यस्तो…
सुन्दर देखिन दीपिका गर्छिन् के ? साबुनको सट्टा लगाउँछिन् यस्तो…
बलिउड चर्चित अभिनेश्री दीपिका पादुकोण अभियनयसँगै फेशन र स्टाइलका लागि पनि चर्चित छिन्। लाखौं फ्यान उनको सुन्दरताको प्रसंसक छन्। उनी फेशन र व्यूटी क्वीन त हुन नै, उनको रेड कार्पेटदेखि हरेक ठाँउमा उनको सुन्दरताको प्रसंसा भइरहन्छ।
सुन्दर देखिनका लागि उनी मेकअप गर्दा सानो सानो कुरामा ध्यान दिन्छिन्। दीपिका मेकअप गर्दा आफ्नो आँखाको विशेष ध्यान पुर्याउँने बताउछिन्। उनले सुन्दरता बारे केहि पहिला भनेकी थिइन् – पहिला म आफ्नो आँखाको तल्लो पट्टीको परेलामा कुनै पनि मेकअप प्रोडक्ट लगाउँथे। तर अब त्यस्तो गर्दिन।’
आँखालाई ब्लयाक आइलाइनरबाट हटाएर हाइलाइट गरेपछि ओठमा रातो लिपस्टिक लगाउछिन् र साबुनको सट्टा लुफा लगाउँछिन्।
उनी आँखालाई ब्लयाक आइलाइनरबाट हटाएर हाइलाइट गरेपछि ओठमा रातो लिपस्टिक लगाउन मन पराउँछिन्। उनी साबुनको सट्टा लुफा लगाउँछिन्। लुफाको प्रयोगले रक्त संचार सही हुन्छ। र, त्वचाको डेड सेल्स पनि निकाल्न सहयोग गर्छ। यसले छालामा चमक ल्याउँने उनि बताउछिन्।
उनी मेकअपका लागि फाउण्डेशनको नेचुरल शेड र ब्राउन रंगको आइशोडा धेरै प्रयोग गर्छिन्। उनी राति सुत्न ओछ्यानमा जानु अगाडि आफ्नो मेकअप हटाएर छाला सफा गर्छिन्। दीपिका एक दिनमा दुई पटक सनस्क्रीन लगाउँछिन् र त्वचालाई हाइड्रेट गर्न नाइट क्रिम लगाउँछिन्। एजेन्सीको सहयोगमा
हेर्नुहाेस् उनका केही सुन्दर तस्विरहरूः